Mitsapa ny lalao ho an'ny ankizivavy - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Inona no voninkazo lovia, vatana any an-danitra, ny biby, ny toetra amam-panahy mahafinaritra - ireo sy ny fanontaniana toy izany dia namaly maimaim-poana amin'ny aterineto fitsapana. Indrindra fa Tian'ny Ankizivavy mametraka ireto fanontaniana ireto, ary ny milalao amin'ny fitadiavana valiny ny fitsapana tsotra. Tsy azo atao mihitsy ny mahafantatra fa tsara ianao raha oharina amin'ny malala mahery fo ny andian-dahatsoratra, mahafatifaty saka na olo-malaza ara-tantara. Raha ny marina, na inona na inona safidy dia tsy nandatsaka, dia azo antoka mba mahay mandrobo anao, milaza momba ny toetra tsara tarehy. Na izany aza, ny hilalao miaraka amin'izay koa, mbola mahaliana, ary koa hizara amin'ny namanao sy ny vokatra.
Hevero ny Superhero
Tena fanamby na marina
Tsindrio ny Speed ​​Test
Sainan'ny 'Izao Tontolo Izao
Fitsapana fitiavana tsotra
Ny lalao fandaharana farany
Ny Robot Bar
Trivia Teenage Mutant Ninja Turtles
Ny mons rehetra dia mila anarana!
Tongasoa eto amin'ny Wayne Quiz
Fa inona ny trano fonenanao haingam-pandeha mahafinaritra?
Girls ny Equestria: Rainbow Rock - Iza no tena zava-dehibe ny namana?
Eoropa Football Jersey Quiz
Fantaro ny Fitiavanao
Lalao Quiz Matematika
ThunderCats dia mierona izay ThunderCat ianao?
Equations: tsara na ratsy!
Color Text Challenge
Iza moa ilay mahery fo Mao Mao
Diniho ny sakafo
Math Challenge Challenge
Ralph Breaks Ny Quiz Internet character quiz
Marvelanao iza ianao?
Fantatrao Tsara ve ny Ankizy Ejipsiana?
Fantatrao tsara ve ny pentina mainty Marvel?
Craig avy amin'ny Creek: The Adventure Quiz
Ny Tantaram-piainako: Inona Ny Rafinao Ankehitriny?
Tadiavo ny mpanararaotra anao
Mafy House: Hho Said izany quiz
Bunsen dia biby: biby na Human Quiz
Inona ny Coffee Today?
Rapunzel Sipa Tag
Lalao Fitsapana tamin'ny Category:
Farany fitsapana lalao
Inona ny fialan-tsasatra nofinofinao?
Polly Pocket Iza amin'ireo polly pal tianao indrindra?
Lalao Barbie Life The Dreamhouse The Amaze Chase Teammate Quiz
Amboary ny ekipanao style
Tom sa Jerry ve ianao?
Alika meme inona ianao?
Quiz an'ny renivohitra
Famaritana mety na diso
Quiz Family Best Quiz
Fifandonana ao amin'ny fianakaviana
Hatraiza ny fahafantaranao ny Iron Man?
Fitsapana ny atidoha
Lalao Online Rehetra Mitsapa ny lalao ho an'ny ankizivavy
Lalao fitsapana ho an'ny voly
Rate ny toetra ary mitodika tena tena sarotra, nefa te foana ny mihevitra ny tenany tsara kokoa. Noho izany dia tonga amin'ny lalao ho an'ny ankizivavy fitsapana izay manao hoe mampamangy. Ary aoka ianao Heveriko fa ny vokatra azo dia lavitra ny fahamarinana, fa zava-dehibe ny hahazoana fanohanana, mba hatoky tena kokoa, satria izany no zava-dehibe mbola kely.
Ny vokatra tsara dia afaka ny ho iray mandrisika, mba manosika ny tena hiova ho tsara kokoa, mba hanamafisana ny snazzy lafin-javatra, nanafina ny hoe tsy te-hampiseho amin'ny hafa. Girls no Tena faly rehefa mampitaha ny lalao fitsapana azy amin'ny matoatoa, andriambavy, mermaids sy ny hatsaran'ny hafa.
ny fitsapana dia tsy namorona maoderina. Maro ireo taranaka teo aloha no lasa fitsapana eo amin'ny taratasy fanontana, Fa ny tena mahaliana dia kopia tao anaty kahie ka naka fanahy namana. Mazava ho azy, toy izany isan-karazany tahaka ny tsy teo ankehitriny, fa noho izy no sarobidy, satria niezaka ny drafters mba hahatonga azy ireo tsy manam-paharoa sy ny believable. Ny tena vokatra azo antoka amin'ny mazava ihany no valin'ireo fanontaniana izay mety aza afangaro.
Koa ankehitriny, fitsapana ho an'ny tovovavy mampiasa fanontaniana tsotra iray: "Inona no toerana tena loko", "Moa ve ianao tia ny nanonofy," "toerana tena tsindrin-tsakafo." Valiny foana ny manome vokatra tsara, ary mba hahazoana mampitovy ny toetra iray manokana, dia ampy ny hosoka valiny sy hamita ny lalao ho imbetsaka mandra-pahatonganao izay tianao.
Funny fitsapana ho an'ny vehivavy
Ny fitsapana mety ho tena samy hafa, ary ny tsanganana maneho safidy:
Ao amin'ny fitoviana ny endri-tsoratra
Ary tamin'ny toetra olombelona
Ary tamin'ny kisendrasendra ny endri-tsoratra
Ao amin'ny fahalalana (tany io kosa Eleazara ny sarimihetsika, ao amin'ny isan-karazany: tantara, matematika, zavamananaina, jeografia, sns)
Fa ny mariky ny zodiaka
Ao amin'ny lojika
Ny zava-misy fa ny ankizivavy te-hahazo fanamafisana ny fangorahana ny mpiara-mianatra, Tsy mahagaga, nefa mahaliana ny mahafantatra, inona no hiasa? Na izany aza, fitsapana toy izany hitranga mampihomehy loatra. Fa ny faharanitan-tsaina fitsirihana toy sy tovolahy. Miezaha handeha ny fanontaniana sy hahazo kokoa ny hevitra. Ny fanatanjahan-tena nitondra mahafinaritra kokoa, ianao fianakaviana milalao kely mpikambana ao amin'ny Simpsons. Ary milalao zana-tsipika, anarana ny firenena Eoropeana amin'ny sarintany sy hahita ny ranomasina sy ny ranomasina ny asa.
fitsapana ho an'ny tovovavy manolotra ny mamaritra ny ditin-kazo manitra, ny ara-pahasalamana indrindra lovia, inona no tokony ho namana tsara indrindra, inona no hahavony taorian'ny tokony hanao sy ny fomba mifidy ny fomba ny akanjo. Ho koa hilaza aminao izay ny biby sy ny na dia ilaina ny matahotra ny amin'ny feno-volana, ary na dia nanolo-kevitra ny hahazo fitiliana ny faharanitan-tsaina. Dia toa paradoxical, nefa inona no mahafinaritra!
mizaha toetra mananihany
Ary ny teny hoe "fitsapana" dia midika hoe ny fitsapana, fitsapana. Ankoatra ny lalao, dia misy maro ny fitsapana matihanina. Any am-pianarana, mandray fitsapana ho fahalalana ny zavatra. Milina sy ny solosaina fandaharana ihany koa ny fitiliana ny tsininy ho fampisehoana eo anoloan'ny fandefasana ho famokarana. Sakafo sy ny makiazy fitiliana ho marika tsara.
Misy maromaro ny fitsaboana fitsapana, sy ny fitondrana vohoka ihany koa. Fitsapana eo amin'ny sehatry ny psikolojia manampy dokotera hamantatra olona ara-dalàna na tsia, ary na miafina fanahiana nanelingelina azy. Ankoatry ny fanontaniana, mampiasa ny Rorschach fitsapana - sary izay mitovy blobs.
ihany koa ny toe-karena manana ny fomba milaza ny fiakaran'ny na lavo ny vola, ny volamena, na ny fampandrosoana ny orinasa. Ankafizo fitsapana sy ny mpahay lalàna, mpahay matematika, mpanabe, sociologists. Noho ny fitsapana, dia afaka mahita ny fironana ho amin'ny asa manokana sy ny tanjona tsara fahaizana ilaina. Fa manam-pahaizana manokana dia afaka manao tonon'andro, mahalala ny daty marina nahaterahany.